ikhaya AMAZIKO E-ASIAN FOOTBALL I-Shinji Kagawa Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts
LB unikeza iNqaku elipheleleyo le-football genius eyaziwa kakhulu ngeSiza; 'Shi'. Ibali lethu le-Shinji Kagawa labantwana kunye ne-Untold Biography Facts kuletha iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwiminyaka yobuntwana. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye. Qalisa.
I-Shinji Kagawa Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Obomi bakwangoko
I-Shinji Kagawa Childhood Photo
UShinji Kagawa ozalwe ngo-17 Matshi 1989 eTarumi-ku, Kobe, Hyōgo, eJapan. Ukususela ebuntwaneni, wayekhathazekile ngebhola kwaye wayekwazi ukuyithwala yonke imini. Wayenokukhala xa ebambelela ithuba lokuthatha ibhola kunye naye esikolweni.
Ngenxa yokunyaniseka kwakhe, abazali bakhe babhalise kwiziko lebhola lebhola yasekhaya. Xa wayeseneminyaka elishumi elinesibini ubudala, wamenywa kwisikolo seMiyagi esichengileyo ukuze aqeqeshe uqeqesho oluthile.
Ungumdlali wokuqala webhola lomdlali waseJapan ukuba asayine isivumelwano sekhontrakthi ngaphambi kokugqiba isikolo esiphakamileyo. Wayephethe amaphupha aphezulu okudlala amaqhosha aseSpanish, iCl Barcelona. Lawa kuphela amaqela awamxhasa ngenkonyana.
I-Shinji Kagawa Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Iminyaka eQulunqisayo
Iminyaka emine ngaphambi kokusekwa kweJ-League yaseJapan, uShinji wayeyinxalenye yenkwenkwe yamakhwenkwe apho abaninzi ababenokuqeqeshwa kwebhola eYurophu kubonakala ngathi banokwenzeka.
Njengomntwana, wachitha iifestile nge FC Miyagi Barcelona, ​​iqela lomfana kwidolophu yaseTumaai, i-500 yamamayela ukusuka ekhaya lakhe e-Osaka. Iqela lalingabandakanyekanga kwigama layo elidumileyo i-FC Barcelona kodwa labelana ngemigangatho yokugqibela yokuzikhethela kunye nokungafani, izakhono eza kuba ziimpawu ezimbini zeKagawa.
I-Shinji Kagawa Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ulwalamano lobomi
Ulwalamano no-Ameri Ichinose. Kungekudala bekukho ukunyuka ukuba wayenze umtshato wemfihlo kunye nentombi yakhe phambi kwentsapho yakhe nabahlobo bakhe.
Nangona kunjalo ukhetha ukwenza okungafanelekanga. Kwaye wakhe umtshato.
I-Shinji Kagawa Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ukufumana Uthando kwakhona
Xa iqela lesizwe laseJapan lifika eNgilani ukuze lizodlale eManchester United ngoJuni 2013, umfanekiso wakhe wokudlala ngothando nomnye intombi yayibangela ukungaqondi kakuhle.
Abaninzi bacinga ukuba ngu-Ameri Ichinose, owayengumfazi. Kamva, waziwa ngokuba ngumzekelo kunye nomphathiswa we-TV ogama linguMargaret Natsuki. Iingxelo zibonise ukuba zihlangene kwikhi ephantsi ukusuka kwi-2011.
I-Shinji Kagawa Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Indlela Yakhe yebhola
Umdlali webhola wezobuchule kunye nobuchule. Kagawa ngumdlali ohlaselayo onokuzithemba odlala ngokuyinxalenye yendima yokudlala. Unokongeza ngaphezu kokudlala kwi-flank okanye ngakwesokudla. U-Kagawa unokuzinyameka kakuhle kwibhola kwaye wenza isigqibo sokwenza nokuthatha isigqibo. Ungumdlali okhuselekileyo ohlala ejikeleza ukukhusela abachasayo befuna ukupasa ngokucokisekileyo kunye nokudala okanye ibhola. Uhlaselele kakhulu umdlalo kunye nokucima ibhola. Kananjalo unesimo esihle sokuhlasela esivumela ukuba abe neyona yeyona ndlela ilungileyo.
Mhlawumbi iimpawu zakhe ezintle zibuchule bakhe, zidlula ukuqeqeshwa, ubuchule, ukubeka indawo ngexesha lokuhlaselwa kunye nokukwazi ukukhetha ukupasa. Ukhawuleza kwaye unokuhlasela aze aphumelele iinjongo. Ngezinye izihlandlo zeqela lesizwe, uye wadlala kwindawo ekhohlo, okanye kwindima ephakathi.
IDaily Diary Diary